Technology – Live Nepal News
Live Nepal News Any type of News and Entertainment live from nepal.
१३ वर्षको उमेरमै पिता बनेका एक किशोरको कहानी
April 9, 2018	Technology 0
कुनै पनि पुरुष १३ वर्षको उमेरमा पिता बन्न सम्भव होला ? आजकल त यस्ता घटना सुन्न पाइएको छैन । तर बेलायतमा चाहिँ कुनै समय एकजना किशोर १३ वर्षको उमेरमै बाबु बनेका थिए । सन् २००९ मा जब यो खबर आयो, तब सबै छक्क परे । कतिपयले त यो खबर पत्याउनै …
विश्वकै चर्चित रोबर्ट सोफियाले नेपालका नायक अनमोल केसीसँग डेट जान मन छ भनेपछि…
March 21, 2018	Technology 0
रोबर्ट सोफिया अहिले विश्वकै चर्चित रोबर्ट मध्येकी एक हुन् । सन् २०१५ मा हङकङको कम्पनी हयानसन रोबोटिक्सले उनलाई निर्माण गरेपछि साउदी सरकारले उनलाई ‘मानव’का रूपमा नागरिकता दिएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । त्यसयता सोफिया विश्वभर हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएकी छन्।यसैबिच हाल साउदी अरबबाट नेपाल ल्याएइएकी पहिलो …
रिसाउँदा गीत गाउँदै हँसाउने र फकाउने ‘सेक्स डल’ बन्यो
March 20, 2018	Technology 0
चिनियाँ कम्पनीले बोल्ने, हाँस्ने र गीत गाउन सक्ने यौन गुडिया (सेक्स डल) निर्माण गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनी ‘डल स्विट डल’ र ‘एक्स डल’ले संयुक्त रुपमा बनाएको ती यौन गुडिया (सेक्स डल)ले बोल्दै, हाँस्दै, रिसाउँदै अनि फेरि गीत गाएर फकाउँदै यौन सन्तुष्टि दिन सक्नेछन् । कम्पनिका अनुसार स्मार्ट फोनको सहयोगले …
पहरा खोपेर गौतम बुद्धको बिशाल मुर्ति बनाउदै नेपाली मुर्तिकार
March 11, 2018	Technology 0
मान्छेका थरीथरीका चाहनारुपी सपना हुन्छन् । मान्छेले प्रगति गर्नका लागि सपना देख्नु पर्छ । सपनै नदेखि अगाडि हिड्ने योजना नवन्न सक्छ । उनलाई देख्ने वित्तिकै उनको सपना थाहा पाउनेहरुले उनको ‘फलामे सपना’ को कुरा सम्झन्छन् । उनको नामै लिँदा पनि यसबेला नेपाली मूर्तिकला क्षेत्र गौरवले सगरमाथा अग्लिएको महसुस हुन्छ र …
पोखरामा सुरु भयो उड्ने ट्याक्सि ! कति लाग्छ भाडा? विस्तृत जानकारी
March 10, 2018	Technology 0
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘लाइट हेलिकप्टर’को व्यावसायिक उडानका लागि अनुमति दिएपछि यो कस्तो हेलिकप्टर हो, यसले कस्तो सेवा दिन्छ, कति पैसा लाग्छ भन्ने चासो सुरु भएको छ। प्राधिकरणबाट उडान अनुमति पाएको हेली एयर नेपालले भदौ तेस्रो साताबाट व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।हेली एयरले फ्रान्सबाट ल्याएका दुई वटा ‘जेरोकप्टर’ हेलिकप्टरबाट …
“आजभन्दा ४७ वर्षअघिको कुरा हो । म अमेरिकी अन्तरिक्ष अभियान अपोलो ११ को लुनर मोडेलको पाइलट थिएँ…” चन्द्रमाको सतहमा पाउडरजस्तै धूलो छरिएको छ, हिँड्दा जुत्ताको स्पष्ट डाम बस्छ ।
March 9, 2018	Technology 0
आजभन्दा ४७ वर्षअघिको कुरा हो । म अमेरिकी अन्तरिक्ष अभियान अपोलो ११ को लुनर मोडेलको पाइलट थिएँ मिसन कमान्डर नील आर्मस्ट्रङसँगै चन्द्रमामा पुगेको थिएँ । चन्द्रमाको सतहमा पहिले नील आर्मस्ट्रङ उत्रे । त्यसैले उनको नाम चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो मानिसका रूपमा रह्यो । तर हामी सँगै गएका हौं । उनीलगत्तै केही सेकेन्डको फरकमा म पनि सतहमा …
मंगलबार जन्मने ब्यक्तीको भुत, बर्तमान, र भविष्य यस्तो छ, जान्नुहोस् तपाइको भविष्य यस्तो छ
March 6, 2018	Technology 0
थुप्रै मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती …
बुद्धिमान मानिसका ३ खराब आनीबानी, कतै तपाइँ त पर्नुभएन ?
March 4, 2018	Technology 0
दिमाग त सबै मानिसको हुन्छ । तर बुद्धि चाहीँ सबैको बराबर कहाँ हुन्छ र ? कतिपय निकै बुद्धिमान, कोही मध्यम त कोही मन्द बुद्धिवाला । बुद्धिमान मानिसले आफ्नो अगाडि आउने धेरै समस्याको समाधान आफै खोज्न सक्छन् सबै क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्छन् । तर यस्ता बुद्धिमान मनिसका पनि केही खराब आनीबानी …
अब चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क
March 1, 2018	Technology 0
विश्वका कैयन् भागमा अहिलेपनि मोबाइल फोनको नेटवर्क उपलब्ध छैन । तर वैज्ञानिकहरु चाहिँ चन्द्रमामा मोबाइलको नेटवर्क पुर्याउन जुटेका छन् । आगामी वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हुने भएको हो । यदि त्यसो भएमा चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा हाइ डेफिनिसन भिडियो स्ट्रिमिंग सम्भव हुनेछ । भोडाफोन जर्मनी, नोकिया तथा अउडी कम्पनीले …
नेपालमा गाईबाट बाच्छी मात्र जन्माउने प्रविधि प्रयोगमा ल्यायो, बाच्छीको मात्रै जन्म दिईने
February 28, 2018	Technology 0
गाईबाट बाच्छी मात्र जन्माउन सकिन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अब अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले नेपालमा गाईबाट बाच्छी मात्र जन्माउने प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएर परीक्षण गर्दा प्रभावकारी बन्दै गएको राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले जनाएको राजधानी दैनिकले …
वानेश्वरमा यसरी हुन पुग्यो झडप
सामुदायिक विद्यालयमै गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएनन्
पुलिसको बर्दीमा ‘गोल्डेन’ दाग : सुन तस्करीमा सईदेखि एसएसपीसम्मको यस्तो ‘कनेक्सन’
८ दिनसम्म अस्पतालको ढोका कुरेका व्यक्तिको उपचार नपाई मृत्यु, मृत्युपछि उपचारको नाटक !
नेपालमा भूमिगत यौन सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छन् ? हेर्नुहोस
Nepal and Djibouti establish diplomatic ties
Nepal and Djibouti set up diplomatic ties
Floods ruin arable land on large scale in Saptari